Barlamaanka Somalia oo kulan ka yeelanaya Darbiga Kenya – Radio Daljir
Barlamaanka Somalia oo kulan ka yeelanaya Darbiga Kenya
Nofeembar 14, 2015 1:29 b 0
Somalia, November 14, 2015 (Daljir) — Mudanayaasha baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya xarunta Golaha shacabka waxana lagu wadaa inay ka soo saaraan qaraar ka dhan ah darbiga Kenya ay ka dhisaneyso xadka Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cumar oo ah habdhowraha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ajandaha kulanka maanta uu yahay mid mudanayaasha ay kulankooda kaga soo saari doonaan qaraar ka dhan ah darbiga ay Kenya ku dooneyso inay ka dhisato xadka kala qeybiyaha Soomaaliya iyo Kenya.
“Waxaa jira kulanka baarlamaanka, waxa uu daba socdaa kulankii 11-kii bishan ay mudanayaasha ku yeesheen xarunta golaha shacabka, waxaa jirtay dood adag oo ay mudanaasha ka yeesheen arrinta darbiga Kenya, runtii maanta qaraar ayaa laga soo saarayaa oo ay soo diyaariyeen guddiyada arrimaha dibadda iyo gudaha ee baarlamaanka u qaabilsan, waxaana ajadaha labaad uu noqonayaa Hindise sharciyeedka Iibka iyo qandaraasyada Qaranka oo kulankii hore hakad ku yimid” ayuu yiri Xildhibaan Ibraahim.
Xildhibaanka ayaa xusay in kulanka Baarlamaanka uu yahay mid ay ku soo saarayaan go’aanka uga aadan arrinta darbiga Kenya ay ka dhisaneyso xadka dalka.
Dad ka badan 100 Qof oo lagu Dilay weerar ka Dhacay Paris